Sport Archives - NDỊ IGBO KWENU
Futbọl clọbu nile dị n’ala igbo n’eme ọfụma
April 23, 2016	Ala Igbo, Sport, Uncategorized 0
Futbọl clọbu nile dị n’ala igbo n’eme ọfụma n’ime 2015/2016 Naijirịa Premier League a n’agba ugbua. N’ime egwuregwu izu iri na abụọ a, Enugu Rangers bụ ndị nọ n’elu club nile so na isọmpi afọa. N’ime maachi iri na abụọ ha gbagoro, ha nwere 24 points. Kemgbe 1984 Enugu rangers ...
Enyimba FC meriri Etoile du Sahel
April 12, 2016	Ala Igbo, Sport 0
Enyimba FC meriri Etoile du Sahel’ si Tunisia 3 – 0 n’isọmpi bọọlu ha gbara na Port Harcout n’ụbọchị ụka gara-aga. Ha mere nkea iji gosi mmadụ niile na ha dị njikere inweta ọnọdụ na CAF Champion League. Onye nyere ha mmeri bụ Mfon Udoh, ya bụ onye nyere goolu ...